Qiimo Dhimista Amazon Prime Student (2020) - Fiidiyow Fiidiyoow, Muusig - Madadaalo
Qiime dhimista ardayda Amazon Prime waxay ka caawin doontaa dadka isticmaala inay helaan adeegyo qiimo jaban. Amazon waa dukaanka tafaariiqda ugu weyn internetka. Waxay adduunyada ku qabsadeen duufaan iyagoo adeegsanaya adeegyadooda.Nidaamka deegaanka wuxuu leeyahay awood aad u ballaaran. Amazon waxay had iyo jeer ballaarisaa xulashooyinka ay siiso macaamiishooda. Xubinnimada ra'iisul-wasaaraha waa lagama maarmaan u ah dadka jecel inay wax ka iibsadaan khadka tooska ah. Khibradda Amazon Prime waa inay ku siiso qanacsanaan badan. Ardaydu waxay ubaahan yihiin amazon adeegyo kala duwan, madadaalo, iyo buugaag.
Barnaamijka dhimista ardayda tixgelinta leh wuxuu kaa caawinayaa inaad ku raaxaysato tijaabo bilaash ah oo lix bilood ah. Waxaa jira astaamo kale oo dheeri ah sidoo kale. Waxaan ku dabooli doonnaa faahfaahin kasta oo ku saabsan sicir-dhimista ku jirta qoritaankan. Akhriso si aad waxbadan uga ogaato.
Sidee loo helaa qiimo dhimista ardayda ee Amazon Prime?
Nidaamka isdiiwaangalinta sicir-dhimista ardaygu waa mid toos u toosan. Qof kasta oo ka diiwaangashan kulleejo hadda wuu ku raaxeysan karaa dhimistaan. Waxaad ku dhamaan doontaa kharash aad u yar muddo dheer. Sicir-dhimista ardaygu waxay si weyn kaaga caawin doontaa yareynta qiimaha guud ee wax iibsiga. Waa ikhtiyaar weyn in lagu helo dhaqaale hoos u dhacaya. Arday badan ayaa la soo dersa dhibaatooyin la xiriira sidii ay u ilaalin lahaayeen dhaqaalahooda. Sicir-dhimista ardaygu waxay ka caawin doontaa inay xaaladda ka yara fiicnaato. Waa kuwan tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo si aad uqorto heshiisyada Ra'iisul-wasaaraha.
Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay ka bilaabaan shabakadda Amazon boggooda kumbuyuutarrada. Waxaad ka booqan kartaa goobta laptop-ka, desktop-ka, ama taleefanka gacanta. Waxay si yaab leh uga shaqeysaa dhammaan meeraha.Isticmaalayaasha waxay gujin karaan xiriiriyaha soo socda - https://amzn.to/2YrHxlA . Waxay ku geyn doontaa bogga rasmiga ah ee rukunka ardayda.
Guji badhanka tijaabada bilowga ee bogga guriga. Waxaad ka heli doontaa geeska kore ee midig ee goobta. Ardaydu waxay heli karaan laba maalmood oo alaab-siin ah oo bilaash ah dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah kulliyaddooda. Tijaabada bilaashka ah ee lixda bilood ah waxay kuu keeneysaa iyadoo lagaa caawinayo heshiiska iskaashiga.
Marka aad bilowdo tijaabada, waxaad u baahan doontaa inaad iska soo qorto websaydhka Amazon. Gali cinwaanka iimaylka iyo lambarka sirta ah ee ku xira koontadaada barxadda.
Isticmaalayaasha aan haysan koontada Amazon waxay u baahan yihiin inay abuuraan mid cusub. Aad ayey muhiim u tahay in la diiwaangeliyo xisaab si looga faa'iideysto faa iidooyinka qiimo dhimista ardayda ee 'Amazon Prime'. Waxaad u baahan tahay inaad gasho faahfaahinta yar yar sida emaylka, lambarka taleefanka, magaca, iyo inaad sameysato eray sir ah. Markaad xaqiijiso koontadaada cusub, hawshu way sii socon kartaa.
Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad haysato faahfaahinta jaamacadda oo aad heli karto. Amazon waxay u baahan tahay inay xaqiijiso inaad wax ku baraneyso kulliyad. Waxay uruurin doonaan xoogaa macluumaad yar oo shaqsiyeed. Nidaamka xaqiijinta otomaatiga ah wuxuu qaataa dhowr daqiiqo.
Sameynta lacag bixinta khadka tooska ah ayaa muhiim u ah isticmaaleyaasha doonaya inay iska diiwaangeliyaan sicir-dhimista. Qorshuhu wuu hawlgeli doonaa lix bilood ka dib, laakiin waxaad u baahan tahay inaad faahfaahinta lacag bixinta horay u bixiso. Gali faahfaahinta lacag bixinta si aad u bilowdo tijaabada bilaashka ah. Waxay si fiican uga shaqeyn doontaa ardayda mustaqbalka fog.
Voila! Waxaad si guul leh ugu saxeexday qiimo dhimista ardayga Amazon adoo isticmaalaya talaabooyinkan. Hadda waad ku raaxeysan kartaa dhammaan faa'iidooyinka caymiska ee la socda adeeggooda. Waxaan kugula talineynaa arday kasta oo da 'yar inuu isku dayo heshiiskan. Lix bilood oo bilaash ah adeegyada ra'iisul-wasaaraha ee Amazon ayaa kaa caawin kara inaad lacag badan keydiso.
Ku saabsan Amazon Prime Student dhimista:
Amazon waa shirkad bilyan-doolar leh oo leh adeegsi aad u tiro badan. Ardayda iyo dhalinyarada qaangaarka ah waxay sameystaan ​​qayb weyn oo ka mid ah macaamiishooda internetka. Qiima dhimista ardayga ee loo yaqaan Prime Prime waa dariiq ay ugu celiyaan macaamiishooda. Hadda waad ku raaxeysan kartaa adeegyadooda caymiska si bilaash ah adeeggan. Khasab kuguma aha inaad bixiso hal dinaar illaa inta dacwadda lixda bilood ah aysan dhammaanayn. Waxay iskaashi la sameeyeen shirkadda weyn ee isgaarsiinta ee 'Sprint' si ay tan uga dhabeyso. Sprint waa adeeg bixiye hormuud u ah dhammaan USA. Cudurka faafa ee coronavirus wuxuu ka dhigay xaaladaha mid qof walba dhib ku ah. Waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso sicir-dhimista ardayga si aad u hesho faa'iidooyin qaar.
Ayaa u qalma dhimista?
Sicir-dhimista ardayda ayaa hadda laga heli karaa oo keliya gobolka Mareykanka. Barnaamijyo la mid ah ayaa ka socda adduunka oo dhan. Amazon waxay ka bilowday India barnaamij dhalinyaro ah, waana suuqa labaad ee ugu weyn. Qof kasta oo ah arday firfircoon oo ka tirsan jaamacad ka diiwaangashan Mareykanka ayaa heli kara faa'iidooyinka. Amazon ayaa xaqiijin doonta diiwaangelintaada isla markaana ku siin doonta faa'iidooyinka isla markiiba. Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay haystaan ​​xisaab email ah 'EDU' sidoo kale. Waa shardi muhiim ah kahor intaadan is qorin.
Faa'iidooyinka Amazon Prime Student dhimis:
Amazon waxay ujeedadeedu tahay inay ardayda siiso faa iidooyin muhiim ah inta lagu jiro xaaladan musiibada ah. Dhaqaalaha curyaamiyey wax caawimaad ah malahan, laakiin heshiiskan wuxuu ku darayaa dahaadh lacag ah. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka dhimista ardayda.
Adeegyada ra'iisul-wasaaraha ee Amazon ayaa hadda loo heli karaa $ 6.49 ardayda. Badanaa, qiimaha waa meel qiyaastii $ 15 bishiiba. Qiimuhu aad ayuu uga yaryahay dhimista. Ardaydu sidoo kale waxay heli doonaan lix bilood oo bilaash ah rukunkaan. Waxay si wax ku ool ah u tahay heshiisyada ugu fiican ee aad ka heli karto khadka tooska ah. Guud ahaan waxaad ku badbaadin doontaa tan lacag ah iibsiyada internetka.
Gaarsiin dhakhso ah oo bilaash ah:
Qofna ma jecla inuu bixiyo lacag dheeri ah oo ku saabsan rarka. Amazon waxay isku dayeysaa inay hubiso inaad wax yar kaydsan karto. Maxkamadeynta bilaashka ah ayaa kaa caawin doonta inaad keydiso tanno badan oo ah khidmooyinka bixinta. Hadda waxaad ka heli kartaa dhammaan badeecadahaaga in lagugu wareejiyo barxaddan. Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo adeegyada sida ugu dhakhsaha badan loo gaarsiiyo waxyaabaha muhiimka ah. Waxay caan ku yihiin inay fiiro gaar ah siiyaan qalabka ardayda.
Muusikada ugu weyn ee Amazon waa maktabad ballaadhan oo heeso waaweyn ah. Isticmaalayaasha qiimo dhimista ardayda waxay ku heli karaan rukunka in ka yar $ 1 bishii.Waa heshiis macaan dhammaan madaxyada baasaska ee dhismaha. Ku raaxayso muusikada tayada sare leh ee loo maro Amazon iyada oo qorshahaaga la duubay.
Heshiisyada ardayda gaarka ah:
Waxaad heleysaa ogeysiiska ugu horreeya ee heshiisyadii ugu dambeeyay ee korantada, buugaagta, cuntooyinka fudud, dharka, daryeelka caafimaadka, iyo agabka.
Nolosha ardaygu waxay u baahan tahay inaad maal gashato alaabooyin badan. Heshiisyadan ardaydu waa kuwo si weyn ugu soo kordhay iskudhafka.
Madadaalada ugu weyn:
Ardaydu sidoo kale waxay marin u helaan madadaalada qiimaha sare leh ee madal ku taal.Waxaad ku raaxeysan kartaa adeegyada Prime Video iyo Prime reading ee rukumadan. Prime Video wuxuu leeyahay maktabad balaaran oo tayo leh. Bandhigga ugu caansan ee ka socda barxadda waa Tom Clancy’s, Jack Ryan. Ra'iisul rexayeysiintu waxay ku siineysaa inaad hesho buugag badan oo gebi ahaanba bilaash ah.
Kuwani dhammaantood waa astaamo waaweyn oo lagu helo hal heshiis oo loo dhan yahay. Waxaad ugu raaxeysan doontaa adeegyadan bilaash muddada lixda bilood ee ugu horreysa.
Ka dhimista ardayda ra'iisul-wasaaraha ah ee Amazon waa dadaal aad u fiican oo laga helo ganacsiga khadka tooska ah. Tilmaamahan, waxaan rajeynay inaan ka nadiifino dhammaan shakigaaga ku saabsan rukunka. Ku raaxayso ka adeegashada khadka tooska ah qiime jaban.
kik messenger online ma soo dejiso
Download mushaarka badan movie buuxa for free
halkaas oo si aad u daawato shows online
cusub soo dejinta filimka
sida looga helo tv-ga lacag la’aan khadka tooska ah
sida in laga takhaluso of hab tumblr ammaan